Toftaa salphaa eenyummeessaa Feesbuukii 'RAKKOON UUMAME JIRA! – Something went wrong' jedhee isin rakkiseef isin gargaaru. | oroict.com
Toftaa salphaa eenyummeessaa Feesbuukii 'RAKKOON UUMAME JIRA! – Something went wrong' jedhee isin rakkiseef isin gargaaru. | oroict.com oroict.com
Post in Hanna Feesbuukii, Hanna Koompitaraa Seerawaa, Leenjii fi Gorsa TQO, Marsaalee Ammee
Eenyummeessaa Feesbuukii keessanii fayyadamuu dadhabdanii? Eenyummeessaa keessan yoo fayyadamtan ykn hiriyyaan keessan maxxansa keessan yoo dubbisuuf yaalu, ‘RAKKOON UUMAME JIRA! – Something went wrong‘ isiniin jedhaa? Eenyummeessaa keessan rakkoon maalii akka mudate wallaaltanii jirtu yoo tahe, Akkasunas furmaata barbaadaa jirtan yoo ta’e akka asiin gadiitti tartiibaan dhiyeessineerra.
Akkuma ergaan bifa yaadachiisaatiin isinitti ergame “something went wrong error” agarsiisu, Eenyummeessaa Feesbuukii keessanitti rakkoon uumame hin jiru, akkasumas icciitiin odeeffannoo dhuunfaa keessanii balaaf saaxilameera jechuu miti, kan saaxilames jiraachuu danda’a. Ergaan asii olii kan agarsiisu:
Fayyadamaan(Facebook App) fayyadamaa jirtan rakkoon mudate Sababni isaa ergichi rakkoo eenyummeessaa dhuunfaa osoo hin taane rakkoo moosajjii(Software) kan ibsu waan taheef. Rakkoon kun yeroo baay’ee yeroo Moosajjiin haaraa qaama moosajjii duraa sun gadi lakkifamu mudata (Occurred during new updated version released). Furmaatni obsuudhaan, yeroo/guyyaa/torbaan muraasa booda ni furama.
>>Koompitararraa fayyadamaa jirtu yoo tahe immoo Window-10 yeroo heddu rakkoo akkasii uumuun waan beekkamuuf – Mala Waldhaani(Troubleshoot) jedhuun furuun ni danda’ama.
Eenyummeessaan keessan yoo hatame(Hacked account): – Akka odeeffannoon icciitii dhaabbaticha FB irraa bahe himutti Rakkoon kun hanga mudate torbaan lamaa ol akka ta’eefi Hattootni(hackers) systema dhaabbatichaa cabsanii eenyummeessaa namoota dhuunfaa hatuu akka hin oolin himamaa jira. Dhiyeenyuma ji’a lama dura eenyummeessaan Maamiltoota Mil.50 oli hatamuu dhaabbatichi himuu maddeen addeessuudhaan yeroo sanayyuu irraa dhokfame malee eenyummeessaan maamiltoota sanaa olii akka balaa hannaatiif saaxilame himaniiru.
Hubadhaa: Wanti hubachuu qabdan, Eenyummeessaa facebook keenyas tahee eenyummeessaa adda addaa interneeta iratti fayyadamnu kan hatuu(hack) gochuu danda’u namni yoo qaamaan argate ykn nama qofa jechuun fayyaalummaadha.
Ogeessi Hannaa(Hackers) sirna hannaaf haala isaa mijeessu (Hacking malicius softwares or virus) adda addaa hojjatee qaama odeeffaannoo isaa argachuu barbaadutti erguudhaan odeeffannoon icciitii nama ykn dhaabbata barbaadamuu sun osoo abbaan hin beekin akka fuudhamee ogeessa sanaaf deemu gochuudhaan ykn immoo sirnichumti ofumasaatii yaalii adda addaa taasisee akka cabsee seenu gochuudhaan tarkaanfii hanna(Kacking) irratti raawwatamuu danda’a.
Walumaagalatti, Rakkoo kanaaf Furmaanni tooftaalee armaan gadii fayyadamuundhaan sirreeffachuun ni danda’ama.
a) – Koompitara banuudhaan eenyummeessaa keessan seenaa yoo ammas isin dide irra deebi’aa iddoola facebok keessan irratti saaqxan sanas banaa(reload your facebook page).
b) – Iyya’aa keessan irraa maxxantuuwwan adda addaa kutaa(Diable add-ons and extensions from your browser)
c) – Iyyaatiifi yaadattuu iyya’aa keessanii qulqulleessaa(clear browser cache and history)
Sana booda koompitara ykn mobile keessan cufaa deebisaa banaa, Eenyummeessaa keessan yeroo kana ofumaa ofcufeera(logged out) taheera, yoon cufamin jiraate immoo keessaa bahaa(logout) godhaa amma deebisaa banaa(login).
Kanaan isiniif ni furama. Yoo ni dida tahe immoo Furmaata lammaffaa kanatu isin gargaara. Innis:
2ffaa:- Eenyummeessaa Facebook keessan irra deebiftanii haarommsuudha(Reset your facebook account).
Eenyummeessaa facebook keessan keessaa bahaa(logout your facebook account)
Iyya’aa interneetaa banaatii hidhaa asiin gadii banaa – open internet browser and open this link:
Unkaa isiniif dhufu irratti odeeffannoo eenyummeessaa keessanii sana hunda seeraan guutaa.
Jecha darbii keessan jijjiiraa(change your password)
Akkuma xumurtaniin iyya’aa interneetaa haaraa banaatii fb.com jedhaa barbaadaa(Search) godhaa.
Amma bifa haaraan jechadarbii haaraa uumtan sanaan fayyadamaatii eenyummeessaa keessan seenaa(login to your account using newly created password).
Haaluma kanaan tartiiba unkaa icciitenya eenyummeessaa keessanii isin gaafatu isiniif dhufu tartiibaan dubbisaa filachuudhaan >>itti fufi(next) jechuudhaan xumuraa.
Yoo xumurtan Eenyummeessaan feesbuukii keessanii akka dur isin beektanitti ofumaa isiniif banama. yoo isiniif dhufuu dhabe immoo, ammas iyya’aa haaraa bantanii fb.com jechuudhaan yeroo barbaaddan(Search) gootan Eenyummeessaan keessan ni argattu, Rakkoon isin mudachaa tures hin jiraatu.
Xumurarratti, tartiiba kana hunda seeraan hordoftanii yoo isin dide, E-mail contact@oroict.com irratti nuuf barreessaa.
Maddi: microsoftreport.com fi odeeffannoo keessa dhaabbatichaati.
Kaayyoon keenya :Hawaaasa keenyaaf Furmaata Tekinoolojii ta'uudha!HORAA BULAA DEEBANAAOROMO ICT | Qubee TechnologiesCell: +251904432625 /+251910130926 Email: oromoict@gmail.com or contact@oroict.comWeb: www.oroict.com - Gorsa ICT: www.afan-oromoo.com - Afaan Oromoo: www.hojii.net - Beeksisa Hojii: https://fayyaa.afaan-oromoo.com - Gorsa Ogeeyyii Fayyaa.
Facebook account hacking, Some thing went wrong -error